တရုတ်နိုင်ငံမှ Eu Outlet လျှပ်စစ် Wall Smart Socket ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Eu Outlet Electrical Wall Smart Socket ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်၊ သင်သည်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆို WIFI စမတ်ခလုတ်ကိုယူနိုင်သည်။
China Eu Outlet Electrical Wall Smart Socket In Stock စျေးသက်သာပါသည်။
Eu Outlet Electrical Wall Smart Socket အတွက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်
Eu Outlet လျှပ်စစ် Wall Smart Socket အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. လူကြိုက်များသောအရောင်များ ရရှိနိုင်ပါသည်- အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ရွှေရောင်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi home socket wifi သည် မီးခံနိုင်ပြီး ရေစိုခံပါသည်။ သင့်မိသားစုအတွက် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း။
3. ပရီမီယံအရည်အသွေး Tempered Glass နှင့် PC Plastic Material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။
4. ဖောက်သည်များထံမပို့ဆောင်မီ switch တစ်ခုစီသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း မတူညီသောအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း။
5. တင့်တယ်သောအသွင်အပြင်၊ ခေတ်မီအလှဆင်စတိုင်များစွာဖြင့် အလွန်လိုက်ဖက်ပါသည်။ ပုံဆွဲခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ စင်္ကြံ၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ ရုံးစသဖြင့် စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Eu Outlet လျှပ်စစ် Wall Smart Socket
Eu Outlet Electrical Wall Smart Socket အတွက် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
အရွယ်အစား- 157 x 86 x 35 မီလီမီတာ
အရောင်များ- အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ဂလိုဒင်
လက်ရှိ : 16A
hot Tags:: Eu Outlet လျှပ်စစ်နံရံ Smart Socket၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်